Dhuusomareeb iyo Guriceel oo maanta la ciiday, kadib shalay oo aan la ciidin – Radio Daljir
Agoosto 22, 2018 10:33 b 0
Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta ay u ahayd maalintii koowaad ee ciidda barakaysan ee Ciidul Adxaa, iyadoona shalay dunida Muslimka looga ciiday si isku mid ah, maadaama Ciidda Al-adxaa aysan ahayn wax ku xiran in bisha la eego oo ay tahay arrin ku xiran acmaasha xujayda e Banka Carafo oo shalay ku beegnayd.
Wariyayaasheena ayaa soo sheegaya takbiirta Ciidda in maanta laga maqalayay magaalooyinka Dhuuso mareeb iyo Guriceel oo shalay aan laga tukan salaaddii Ciidda.
Shacabka Soomaaliyeed iyo dunida Muslimka ayaa maanta ay u tahay maalintii labaad ee Ciidda.
Khilaafka noocan oo kalle ah oo ka dhasha waqtiga Ciidda Al-Adxaa ayaa ah arrin ugub ah, marka loo eego xiliyadii hore oo kaliya la isku khilaafi jiray Ciidda Bisha Soon Fur ee Fitriga.
Al-shabaab iyo Ciidamada Dowladda oo ku Dagaalamay Marka